ငှက်တစ်ကောင် ရဲ့ကောင်းကင်: July 2016
ငှက်ဆိုတာ ပျံသန်းရင်း သေကြရတယ်....
Posted by မိုးပျံငှက် at 10:52:00 PM No comments: Links to this post
မိုးပျံငှက် ရှင်သန်ခြင်း #3
Posted by မိုးပျံငှက် at 11:59:00 PM No comments: Links to this post
Artist Ko Zayyar Lin
၂၀၁၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင် လှည်းတန်းမှာ အဆောင်နေတုန်းက ပန်းချီဆရာနဲ့ အပေါ်ထပ် အောက်ထပ် သူ့အခန်း သွားလည်ခဲ့တယ်။ သူက ဦးသန့်ပုံတူ စာအုပ်မျက်နှာဖုံးရေးဆွဲ နာမည်ရခဲ့သူလို့ သိရပါတယ်။ ကျွန်တော်ရောက်တော့လည်း သူ Portrait ဆွဲနေပါတယ်။
Ayeyarwady River 2013 Acrylic on canvas 36″ x 48″
နောက်တစ်ယောက်က Artist Ko Shwe Thein http://thukhuma.org/artist-gallery/shwe-thein/
သူ့ကိုတော့ New Zero Artspace မှာတွေ့ခဲ့တာပါ။ သူကတော့ အခုတော်တော့်ကို နာမည်ရပန်းချီဆရာဖြစ်နေပါပြီ။ ပန်းချီအမှတ်တရအဖြစ် သတိရစွာ ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။
Posted by မိုးပျံငှက် at 9:22:00 PM No comments: Links to this post
ကိုယ့်ယုံကြည်ချက် ၊ ခံယူချက်နဲ့ လောကကို အံတု မဆုံးတဲ့ ခရီးတွေ ပျံသန်းနေပါတယ်
မိုးပျံငှက် Moe Pyan Hnget
Oil color on canvas 16"x20"
Oil color on canvas 16"x20" အဆုံးသတ်တော့ရင် ကောင်းမယ်။ ဆွဲရင်းဆွဲရင်း အဆုံးသတ်ဖို့ခတ်။ မိုးပျံငှက်
တင်ဆက်သူ၏၀န်ခံချက် - 2011 ဧပြီလမှာ သင်္ကြန်တွင်းဖတ်ဖို့ စာအုပ်လေးတွေ လိုက်ဝယ်ပါတယ်။ တစ်ဆိုင်ဝင်တစ်ဆိုင်ထွက်၊ လမ်းဘေးအဟောင်းတန်းမကျန်ပေါ့။ လှည်းတန်းက စာပေလောက စာအုပ်ဆိုင်မှာ စာအုပ...
အကယ်၍ - အကယ်၍ မင်းအသိုင်းအ၀ိုင်း တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားပြီး ဒါတွေဟာ မင်းကြောင့်လို့ ၀ိုင်းဝန်းအပြစ်တင်ကြတဲ့အခါ မင်းဟာ တည်ငြိမ်စွာနဲ့ ရင်ဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်...... အက...
၀င်းဦး - ကမ်းဦးသို့ ပြန်လာပါ -
My Blog Status - Total Pageviews
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you
မိုးပျံငှက်. Travel theme. Powered by Blogger.